अधिकांश जिल्लामा विद्युत् सुचारु
काठमाडौँ, साउन ३१ गते । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण चार दिनदेखि बन्द रहेकोे तराई क्षेत्रका प्रमुख औद्योगिक करिडोर तथा सहरमा सोमबार दिउँसोबाट विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरिएको छ । पूर्वी नेपालका दुहवी सव स्टेसनबाहेक हेटौँडादेखि पश्चिम कञ्चनपुर क्षेत्रका प्रायः सबै क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्भार भई विद्युत् सेवा सुचारु गरिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोमबार साँझ दिनुभएको जानकारीअनुसार दुहवी सव स्टेसनबाट लोड बाइपास गरी पाडाजुँगी १३२ केभी सव स्टेसनमा चार्ज गरी अनारमनी, चन्द्रगढी र धुलाबारी वितरण केन्द्रमा विद्युत् सुचारु गरिएको छ । पूर्वी नेपालका विद्युत् प्रशारणका लागि महìवपूर्ण मानिएको दुहवी सव स्टेसन चार दिनदेखि डुबानमा पर्दा पूर्वाञ्चलमा विद्युत् आपूर्ति हुन सकिरहेको थिएन । प्राधिकरणका प्राविधिकले तत्काल युद्धस्तरमा काम गर्दा झापा जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति सम्भव भएको हो । दुहवी सव स्टेसनका स्वीच यार्डमा अझै पानी जमेकाले लाइन चार्ज हुन सकिरहेको छैन । यो समस्या भोली, पर्सिसम्म समाधान गर्छाैं कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार मङ्गलबार इलामलगायतका पहाडी जिल्लामा पनि विद्युत् आपूर्ति सहज हुने गरी काम भइरहेको छ । देशभरका महìवपूर्ण सव स्टेसन र प्रशारण लाइनमा तत्काल मर्मत सम्भार गरी विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, विराटनगरको दुहवी सव स्टेसनबाहेक अन्य सबै संरचनाको तत्काल मर्मत सकिएको छ । वीरगञ्ज, हेटौँडा, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरसम्मका सबै उद्योगधन्दा र सहरवासीलाई विद्युत् सेवा दिन हामी सफल भएका छौँ ।
उहाँका अनुसार जलेश्वर, राजविराज, बर्दिया र सुर्खेतमा अझै काम गर्न केही समस्या देखिएको छ । पूर्वी तराईमा पानीको सतह अझै घट्न सकेको छैन भने सुर्खेतमा विद्युत्का पोल बगाएको र बर्दियामा रूख ढलेर समस्या देखा परिरहेको छ । ती समस्याको समाधान गर्नका लागि प्राधिकरणका प्राविधि सक्रिय भइरहेका छन् ।
घिसिङका अनुसार सुर्खेत, बर्दिया, राजविराज, जलेश्वर र इलामतिरको समस्या मङ्गलबारसम्ममा समाधान भई बुधबारसम्म देशैभर बिजुली सेवा सुचारु गर्ने योजनामा प्राधिकरण रहेको छ तर पनि बाढी, पहिरो र डुबानका कारण प्राधिकरणलाई दीर्घकालसम्म असर पर्ने गरी क्षति भएको संरचनाको मर्मत सम्भार गर्न भने अलि समय लाग्ने बताइएको छ ।
उच्चस्तरीय टोली खटाइयो
राजधानीलगायतका प्रमुख सहरलाई लोडसेडिङमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको सरकारले तत्काल मर्मत सम्भार गरी प्रमुख सहरलगायतका औद्योगिक करिडोरमा कसरी बिजुली आपूर्ति गर्ने भन्ने चुनौती देखिएका बेला बाढी, पहिरो तथा डुबानले क्षति पु¥याएका संरचनाको विवरण, मर्मत सम्भार गर्नसकिने समय आदि अध्ययन गर्न सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालकहरूको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली खटाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार देशैभर बाढी पहिरोले विद्युत्का संरचनामा क्षति पुगेकाले तल्ला तहका कर्मचारीको भर पर्दा ढिलो गरी क्षतिको विवरण आउने र तत्काल मर्मत सम्भारको काम हुन नसक्ने भएकाले प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई नै फिल्डमा खटाउने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति भएको पूर्वाञ्चलमा प्राधिकरणका सञ्चालक चेतराज जोशी, मध्यमाञ्चलमा उमेश थानी, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा भक्तबहादुर पुन र पश्चिमाञ्चलनमा चन्द्र टण्डनको नेतृत्वमा प्राधिकरणको प्राविधिक टोली खटाउने निर्णय भएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, विराटनगरमा डुबानको समस्याले हवाई उडानसमेत हुन नसक्दा अध्ययन टोली जान सकेको छैन अरू क्षेत्रमा भने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यको नेतृत्वमा टोली फिल्डमा खटिइसकेको छ । चाँडै प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप मर्मत सम्भारका लागि प्राविधिकहरू खटिने भएका छन् ।
प्राधिकरण भार सम्प्रेषण केन्द्रका प्रमुख विष्णुप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार दुहवीको सव स्टेसनमा डुबान परेका र सो क्षेत्रको १३२ केभी प्रशारण लाइनको एउटा टावर पनि भत्किएको छ ।
उहाँका अनुसार सोमबार बुटवल बर्दघाट प्रशारण लाइनमा रूख ढलेकोले प्रशारण बन्द भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १३२ केभी र ६६ केभी लाइन तथा सव स्टेसन अन्तर्गत दमकदेखि गोधक १३२ केभीको लाइनको टावर नं. १७ बाढीका कारणले ढलेको छ भने हेटाँैडा सव स्टेसन अन्तर्गतको हेटौँडा सिमेन्ट नजिकको ६६ केभी टावर सडकमै ढल्न थालेको केही क्षेत्रमा विद्युत् सेवा बन्द गरिएको छ ।
चन्द्रनिगाहपुरदेखि पथलैया १३२ केभीको सर्किट नं. २ मा केही खराबी आएको छ भने ढल्केवरदेखि चन्द्रनिगाहपुरको सर्किट नं. १ मा क्षति पुगेको छ ।
त्यसैगरी नयाँ निर्माण गरिएको रक्सौलदेखि परवानीपुर १३२ केभीको भलुहिवास्थितको टावरमा बाढीले पूर्ण क्षति पु¥याएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी लाहान सव स्टेसनअन्तर्गतको रुपनीस्थित फिडरबाहेक अन्य संरचनामा डुबानमा परेकोले महìवपूर्ण संरचनामा क्षति पुगेको हुनसक्ने बताइएको छ । ढल्केवर सव स्टेसन अन्तर्गतको जनकपुर फिडरबाहेक अन्य सम्पूर्ण फिडर गत शुक्रबारदेखि बन्द रहे पनि सोमबारबाट केही सुचारु भएको बताइएको छ । सिमरा सव स्टेसनमा गत शुक्रबार र शनिबार लगातार डुबानमा परेकाले र क्षतिको विवरण अझै थाहा हुन सकेको छैन ।
उत्पादन र आयातमा पनि कमी
धेरै जसो सव स्टेसन तथा फिडर बन्द भएकाले जलविद्युत् गृहको उत्पादन क्षमताभन्दा पनि धेरै कम उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यसरी उत्पादन कम भएका विद्युत् गृहमा कालीण्डकी ए, मध्य मस्र्याङ्दी, मस्र्याङ्दी, बालाजु त्रिशूली र गण्डक पावरहाउस रहेका छन् ।
त्यसैगरी विद्युत् आयातको अवस्थामा समेत प्रभावित भएको छ । विशेष गरी ढल्केवर–मुजपफुर, टनकपुर तथा विहारबाट नेपालको पूर्वी क्षेत्रका विभिन्न विद्युतीय नाकाबाट आयात गरिने विद्युत् आयातसमेत प्रभावित भएको छ ।